Inyunyana izongenela isiteleka enyuvesi ngodaba lwamaholo | News24
Inyunyana izongenela isiteleka enyuvesi ngodaba lwamaholo
Johannesburg - INational Education, Health and Allied Workers' Union (Nehawu) izongenela isiteleka e-University of South Africa (Unisa) kusukela ngoLwesithathu ngemuva kokuba izingxoxo zamaholo zibhuntshile phakathi kwenyunyana nabaphathi benyuvesi.
INehawu ifuna abasebenzi bonke benyuselwe amaholo ngo-12% kanti abaphathi base-Unisa bona babeka etafuleni u-6.5%.
OLUNYE UDABA: Ayikho imali yokuqeqesha abahlengikazi abangu-700
Inyunyana ifuna nokuba bonke abasebenzi baqashwe ngokugcwele yinyuvesi.
"Amalungu ethu enyuvesi bakhathele ukuthathwa kancane ngabaphathi benyuvesi futhi bazimisele ngokungenela isiteleka kuze kube bayazithola izimfuno zabo," kusho iNehawu esitatimendeni.
"Abasebenzi ngeke basebenze kuze kube abaphathi benyuvesi balungisa udaba lwamaholo baphinde baqashe bonke abasebenzi betoho abaqala ukusebenza kusukela ngo-2014 emnyangweni we-Information and communication technology (ICT)."